Formstack: Vaom-bola azo antoka mpanjifa ny maso ivoho | Martech Zone
Alakamisy, Jona 28, 2012 Alatsinainy Janoary 1, 2018 Douglas Karr
Sarotra amin'ny maha maso ivoho ny miasa amin'ny alàlan'ny mpanjifa ny olan'ny fisoratana anarana, ny olana amin'ny serivisy, ary ny olana amin'ny kaonty hafa. Raha tokony hiandry ny etsy sy eroa isika, ny fivoriana sy ny fizarana ny efijery, dia mahazo ny mari-pahaizana rehetra ilaintsika amin'ny mpanjifanay fotsiny izahay. Ity karazam-baovao ity dia tsy tsara raha mipetraka fotsiny amin'ny mailaka na amin'ny rakitra an-tsoratra any ho any - ka mampiasa tsara Formstack fa tsy.
Ohatra iray amin'izany rehefa mifindra monina avy amin'ny serivisy fampiantranoana iray hafa izahay. Mba hanamorana ny zavatra dia mametraka fisamborana tsotra izahay taratasy ho an'ny kara-panondron'izy ireo sy mari-pahaizana momba ny fisoratana anarana, avy eo izahay mividy ny kaonty ho azy ireo ary mamindra azy ireo tsy misy olana.
Formstack manome sehatra azo antoka tanteraka, ary manampy fidirana fanampiny mihitsy aza hidirana amin'ny angona azo antoka. Midika izany fa na dia misy mahazo ahy aza Formstack kaonty, tsy afaka miditra amin'ny mombamomba azy ireo izy ireo raha tsy mahafantatra teny miafina fanampiny. Izany dia ahafahantsika mitazona ny mari-pahaizana amin'ny toerana azo antoka, mampiasa azy ireo rehefa ilaina, ary tsy mila miahiahy momba azy ireo amin'ny andro sisa!
Raha maso ivoho ianao dia mifandraisa amin'ilay mpanohana ny haitao misy anay Formstack hanomboka ny kaontinao manokana. Raha miara-miasa amin'ny masoivoho iray ianao dia aza mandefa ny carte de crédit anao na ny antsipirian'ny fidiranao amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny mailaka, fax, na an-telefaona… asaivo manangana taratasy fanamarinana an-tserasera izy ireo ahafahanao mametraka ny mombamomba anao.
Tags: sampan-draharahafahafahana misafidymari-pahaizana momba ny mpanjifafidirana amin'ny registrar domainloginsmasoivohon'ny marketingbokotra tenimiafinany tenimiafina
Balihoo: Automatique marketing any an-toerana